तपाईंको साथीले रिफ्युजी भिषाको लागि आवेदन दिन त पाउनुहुन्छ तर त्यसको लागि योग्य हुनको निम्ति निम्न पाँच वटामध्ये कम्तीमा पनि कुनै एक कारणले गर्दा उहाँ आफ्नो देश फर्कन नसक्ने स्थितिमा रहेको हुनुपर्छ ।
४. कुनै विशेष सामाजिक समूहको सदस्यता
५. राजनीतिक विचार
यी पाँच वटामध्ये कुनै एक वा एकभन्दा बढी कारणले आफूमाथि उत्पीडन वा अत्याचार हुनसक्ने आधार सहितको त्रासले गर्दा आफू नागरिक भएको वा आफू बस्दै आएको देश फर्कन नसक्ने वा फर्कन नचाहने स्थितिका विदेशीलाई अष्ट्रेलियाले पीआर दिनसक्छ । यो भिषा पाउन त्यति सजिलो भने छैन । तपाईंको साथीले कुनै रजिष्टर्ड माइग्रेसन एजेन्ट वा माइग्रेसन सम्बन्धी काम गर्ने कानुन व्यवसायीलाई भेटेर सल्लाह लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
म अष्ट्रेलिया आएको पाँच वर्ष भयो । कुकरी, विजनेस र आइटी गरेर तीनवटा विषयमा डिप्लोमा गरेको छु । अहिले भिषा सकियो र केस अफिसरले धम्कीको भाषामा भिसा नथप्ने संकेत गरेको छ । एक कलेजले मलाई कोर्ष सकिएको सर्टिफिकेट पनि पनि दिएको छैन । यो अवस्थामा म उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न कसरी सक्छु ?
के तपाईं फेरि अर्को डिप्लोमा गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो ? लगातार एउटै लेभलको कोर्स र त्यो पनि सस्तो कलेजहरू मात्र छानेर गर्ने गर्दा तपाईंले ती कोर्र्षहरू अष्ट्रेलियामा लामो समयसम्म बसिरहने प्रयोजनको लागि मात्र गरिरहेको हो कि भन्ने शंका उठ्नु स्वभाविक हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा केस अफिसरले तपाईंमाथि प्रश्न उठाउन सक्छन् । हुन त तपाईंले केस अफिसरले ‘धम्कीको भाषा’ प्रयोग गरेको मात्र भन्नुभएको छ । तर, के कारणले त्यस्तो भनेको हो खुलाउनु भएको छैन । तर, मेरो विचारमा केस अफिसरले सम्भवतः तपाईं सक्कली विद्यार्थी हो कि होइन भन्ने कुरामा नै शंका गरेको हुनसक्छ ।
यदि तपाईंले कलेजको शूल्क पूरै तिरिसक्नुभएको छ भने उसले तपाईंको सर्टिफिकेट रोकेर राख्नु नपर्ने हो । तपाईंको कुनै गल्ती नहुँदा नहुँदै पनि यदि कलेजले तपाईंको सर्टिफिकेट रोकेको छ भने त्यो गलत हो । तपाईं सिधै कलेजको प्रिन्सिपल वा अन्य उच्च अधिकारीसँग यस बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ । अन्यथा, यसका लागि उजुर गर्नको निम्ति निकायहरू पनि छन् ।
मेरी गर्लफ्रेण्डसँगको डि–फ्याक्टो सम्बन्धको आधारमा मैले पीआर पाएको हुँ । तर पछिल्लो केही समययता हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छैन । यदि हामी छुट्टियौँ भने यसले मेरो पीआरमा केही फरक पार्छ ?
यदि पीआर दिँदाको समयसम्म तपाईंहरूको सम्बन्ध सक्कली र निरन्तर-genuine and ongoing_ थियो भने त्यसपछिको घटनाक्रमले तपाईंले पाएको पीआरलाई केही फरक पर्दैन । तर, यदि तपाईं अझै सबक्लास ३०९ वा ८२० भिषामा हुनुहुन्छ र त्यसलाई नै पीआर भन्नुभएको हो भने चाहिँ तपाईंहरूको बिग्रेको सम्बन्धले तपाईंलाई असर पार्नसक्छ ।
यस स्तम्भमा दिइएका जानकारी पूर्ण, अद्यावधिक र सबैका लागि उपयुक्त नहुनसक्छन् । कुनै निष्कर्षमा पुग्नु वा कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुभन्दा पहिले अध्यागमन विभागको वेबसाइट, माइग्रेसनसम्बन्धी परामर्श दिने वकिल वा रजिस्टर्ड माइग्रेसन एजेन्टबाट आवश्यक जानकारी लिनु उचित हुन्छ । लेखक रजिष्टर्ड माइग्रेशन एजेन्ट-MARN 1172267_ हुन् ।
तपाईंका पनि कुनै जिज्ञासा छन् भने info@nepalipatra.com.au मा पठाउन सक्नुहुन्छ । तपाईंको परिचय गोप्य राखिनेछ ।